Ankylosing spondylitis - यो मेरुदण्ड र जोइन्टहरूमा को एक पुरानो रोग, को intervertebral स्पेस फ्युजन गर्न प्रमुख, को मेरुदण्ड पैदा "बांस मार" समान बनेर, सबै दिशामा गतिशीलता हराउछ। अक्सर रोग susceptible मानिसहरू, ankylosing spondylitis कम प्राय महिलाहरु मा, हुन्छ अवस्थामा को बारे मा 15% (9 को अनुपात बारेमा डाटा: 1 मिति)। यो स्थिति को लागि कारण - रोग atypical र पछि साथ निदान महिलाहरु हुन्छ।
ankylosing spondylitis के हो?
बिस्तारै र बिस्तारै विकसित जो मेरुदण्ड, जोइन्टहरूमा को यो रोग, र केही आन्तरिक अङ्गहरू। यो लगभग सधैं छ (तर अवस्थामा को 100% मा) प्रतिरक्षा प्रणाली मात्र एक परिमार्जन प्रतिजन भएका मान्छे मा हुन्छ - HLA B27। बस एक यस्तो प्रतिजन को उपस्थिति तथ्यलाई भनेर जान्छ:
- जोडहरुको को ऊतक संक्रमण थप संवेदनशील हुन्छ;
- केही जीवाणु, HLA साथ प्रतिक्रिया एक तथाकथित autoimmune प्रतिक्रिया, शरीर एक विदेशी प्रोटिन रूपमा आफ्नै जोइन्टहरूमा को ऊतक पहिचान गर्दा, र यो आक्रमण गर्न सुरु सुरु B27।
फलस्वरूप, त्यहाँ articular उपास्थि विनाश संग जोडहरुमा सुनिंनु छ। मुख्यतया श्रोणि गर्न मिश्रित sacrum पीडित, त्यसपछि vertebrae बीच cushioning तह नष्ट गरे।
शरीर दुर्भाग्यवश, articular उपास्थि र intervertebral डिस्क पुनःस्थापित गर्न गरिन्छ, articular सतहहरु को विरूपण लागि क्षतिपूर्ति गर्न खोज्छ, तर। बढ्दै फलस्वरूप हड्डी ऊतक, अझै र बंधन र स्पाइनल ossified।
जोडहरुको प्रभावित आँखा साथै मृगौला, फोक्सोमा र प्रमुख रक्त नली (तिनीहरूले सुनिंनु विकास)।
सुविधाहरू महिलाहरु मा प्रवाह
1 Ankylosing spondylitis महिलाहरु मा तथाकथित rizomielicheskomu विकल्प मा ठाँउ लिन्छ। यो हो कि प्रभावित मेरुदण्ड र यस्तो काँध र हिप रूपमा जोइन्टहरूमा।
2. Ankylosing spondylitis महिलाहरु exacerbation र छूट को अवधि संग, अधिक दीर्घकालीन विकास। एक्स-रे मा विशेषता संकेत रोग को शुरू मात्र पछि 10-15 वर्ष पाउन सकिन्छ।
3. अर्को सुविधा सबै महिला ossified कि मेरुदण्ड र प्राथमिकताको मात्र lumbosacral मेरुदण्ड तथ्यलाई छ। महिला spondylitis रोग पनि रोग अन्तिम चरणमा तिनीहरूलाई छोडेर immobilize छैन, न्यूनतम गतिशीलता बाँकी छन्। यसबाहेक, आफ्नो ढाड (पुरुष गर्न विपरीत मा) एक कम डिग्री गर्न विकृत छ।
4 प्रक्रिया लगभग आन्तरिक अङ्गहरू संलग्न कहिल्यै छ।
यो धेरै उच्चारण छन् जो र विशेष गतिशीलता सीमित छैन विभिन्न जोइन्टहरूमा, दुखाइ को उपस्थिति संग महिलाहरु मा ankylosing spondylitis सुरु हुन्छ। त्यसपछि, यो कहिलेकाहीं किनभने उनको महिला माथि wakes, बिहान नजिक हुन्छ कि दुखाइ उल्लेख गर्न सकिन्छ। दुखाइ दिन को समयमा टाढा जान्छ। को मेरुदण्ड probing जब यो पशुको चाक मा मात्र थोरै दुखाइ उल्लेख गरेको छ।
केही अवस्थामा, पीडित पहिलो एक वा दुवै हुन सक्छ र हिप संयुक्त, को दुखाइ पनि प्रारम्भिक बिहान घण्टामा देखिन्छ जसमा र कमर र तिध्रा बिचको भाग र गोडा मा दिन्छ (र शायद यो एडी गर्न आउँछ)। हार्ड को बिहान यी जोइन्टहरूमा मा एक खुट्टा (खुट्टा) सीधा गर्न, तर लक्षण दिनमा गायब। यी लक्षण पनि काँध संयुक्त मा उत्पन्न गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले (पहिलो घण्टा), अलिकति व्यक्त चाँडै analgesic ट्याब्लेटको पिउने त्यसपछि नै तीव्रता संग पुन: देखा, एक समयको लागि गायब हुन सक्छ पछि पारित।
ankylosing spondylitis को उपचार
"महिला" उपचार मानक उपचार फरक छैन। कठिनाई मात्र सही निदान गर्न।
1) विरोधी-भडकाऊ एजेन्ट "Olfen," "Phenylbutazone"।
2) दुर्लभ अवस्थामा यो हर्मोन को आवश्यक intraarticular प्रशासन छ ( "Kenalog" ड्रग्स "Diprospan") सुनिंनु कम गर्न।
3) तयारी "Sulfasalazine"।
4) Immunosuppressive एजेन्ट (लागूपदार्थको "Leykeran" "Azathioprine"), रोग मानक उपचार गर्न उत्तरदायी छैन भने प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो कम छ भनेर प्रगति, spondylitis ankylosing जब यो मोटर गतिविधि राख्न महत्त्वपूर्ण छ भनेर थाह महत्त्वपूर्ण छ।
Herniated स्पाइनल SHmorlja: कारण, लक्षण र उपचार
एक आलिन्द septal aneurysm के हो?
Kraurosis - उपचार सफल हुनेछ!
अङ्गुर: रोपण रेखाचित्र वसन्त
कसरी दैनिक र छुट्टी तालिकाको लागि smelt कुक गर्न?
बगैचा भ्याकुम क्लिनर - समीक्षा। पेट्रोल बगैचा भ्याकुम क्लिनर - मूल्यहरु
फलाम फिलिप्स जीसी 3320 - एक उचित मूल्य लागि आधुनिक उपकरण